नेप्सेमा २ कम्पनीकाे सेयर सूचिकृत, कुनकाे कति कित्ता ? - Arthasansar
नेप्सेमा २ कम्पनीकाे सेयर सूचिकृत, कुनकाे कति कित्ता ?
शनिबार, २७ कार्तिक २०७८, १२ : ३५ मा प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा यस साता विभिन्न २ वटा कम्पनीकाे सेयर सूचिकृत भएकाे छ । स्टकका अनुसार एउटा कम्पनीकाे हकप्रद सेयर र एउटा कम्पनीकाे प्राप्ति पश्चातकाे सेयर यस साता नेप्सेमा सूचिकृत भएकाे हाे ।
बिहीबार हाइड्राइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) काे ७ कराेड ७० लाख कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएकाे हाे । कम्पनीले साउन ५ गतेबाट भदाै ८ गते, मंगलबारसम्म १ः१ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ११ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकाे थियाे । उक्त हकप्रद सबै बिकेकाे थिएन । कम्पनीले फेरि लिलाम बढाबढ गरेर बिक्री खुल्ला गरेकाे थियाे ।
त्यसैगरी, बिहीबार नै इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेपाल एग्रो लघुवित्तलाई १:०.९८ काे अनुपातमा प्राप्ति गर्दा कायम हुन आएकाे प्रति सेयर अंकित तथा चुक्ता मूल्य एक सय रूपैयाँ दरकाे ६ लाख ३९ हजार ५ सय ३५ दशमलव २२ कित्ता सेयर धिताेपत्र सूचिकरण विनियमावली, २०७५ बमाेजिम नेप्सेमा काराेबार हुन सक्ने गरी सूचिकृत भएकाे हाे ।